संविधानतः नेपाल ‘समाजवादउन्मुख’ राज्य हो । नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल सिद्धान्तले ‘समाजवादी’ छन् । व्यवहारमा सिद्धान्त प्रतिबिम्बित छ छैन, त्यो अर्कै कुरा । शब्दमा भने सबै एक से एक समाजवादी । एउटा भनाई छ– ‘तपाई समाजवादी हुनुस् नहुनुस् तपाईको खुशी तर राजनीतिमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने कुनै न कुनै प्रकारले समाजवाद जप्न कहिल्यै नछोडनुस्, किनकी समाजवाद राजनीतिको बजारमा सबैभन्दा सजिलोगरी बिक्ने मालवस्तु हो ।’ एउटा कोणबाट हेर्दा आज नेपालको अवस्था यस्तै छ ।
अर्को कोणबाट हेर्दा समाजवादप्रतिको यो मोह एक सकारात्मक परिघटना हो । अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ– ‘एक्जिस्टेन्स कम्स बिफोर इसेन्स ।’ यसको सामान्य अर्थ भनेको विचारलाई वस्तुले निर्धारण गर्दछ । यसलाई राजनीतिमा भन्न सकिन्छ- कुनै पनि राजनीतिक अवधारणा यथार्थमा परिणत हुनु अघि सघन विमर्शमा हुनुपर्दछ । समाजवाद अधिकांश पार्टीहरुको एजेण्डा बन्दै जानु नेपाल निकट भविष्यमा समाजवादतिर प्रवृत हुने लक्षण पनि हो । जसरी हिजो गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता विमर्शमा थिए, आज यथार्थमा परिणत भए, त्यसरी नै आज समाजवाद जुनस्तरको छलफलमा छ, त्यो भविष्यमा अवश्य व्यवहारमा परिणत हुनेछ ।
तर, कुन समाजवाद ? कस्तो समाजवाद ? किन समाजवाद ? कसरी समाजवाद ? आदि प्रश्न अझै अनुत्तरित छन । यी सबै दलहरुले भनेको समाजवाद एउटै हो कि फरक-फरक हुन ? एउटै हो भने एउटै उद्देश्यका लागि यतिका धेरै दल किन चाहियो ? फरक-फरक हुन भने समान शब्दाबलीले सृजना गर्ने भ्रम वा अन्यौलबाट कसरी मुक्ति पाउने ? के आधारमा मतदाताले यी दलका समाजवादी मान्यताको फरक छुट्याउने ? यी प्रश्नमा प्रवेश गर्नु अघि सम्भवत् राजनीतिक दर्शनहरुको सामान्य ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।
सम्बर्द्धनवादको सारतत्व ‘समाजको परम्परागत मौलिक चरित्रको रक्षा र रुढीवादी नैतिक मूल्यको संरक्षण’ हो । मूलतः यो थोमस हब्सको चिन्तनमा आधारित राजनीतिक दर्शन हो । बेलायतको टोरी यो विचारधाराको दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक दल हो । अमेरिकाका रिपब्लिकनहरु राजतन्त्र त मान्दैनन् अरु विषयमा कन्जरर्भेटिभ नै हुन्छन् । सम्बर्द्धनवाद कुनै क्रान्तिकारी विचारधारा हैन । क्रान्तिबाट डराएका कुलिनहरुको आत्मरक्षाको कवच हो । नेपालमा राप्रपा विशेषतः कमल थापा समूहले यो विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
फ्रि म्यान ( स्वतन्त्र व्यक्ति ) र फ्रि मार्केट ( स्वतन्त्र बजार) अर्थात् ‘स्वतन्त्रता’ उदारवादको सारतत्व हो । यो विचारधारा जोह्न लकको दर्शन र बेलायती गौरवमय क्रान्तिबाट अनुप्रेरित भएको हो । बेलायतको ह्वीग पार्टी जसको नाम फेरेर ‘लिवरल डेमोक्र्याट्स’ बनाइयो, यो विचारधाराको मुख्य ऐतिहासिक दल हो । हुनतः नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी नै भन्न रुचाउँछ तर, सन् १९९० यताका उसको सम्पूर्ण व्यवहारहरु उदारवादमा आधारित छन् ।
साम्यवादले ‘समानता’ लाई मुख्य तत्व मान्दछ । यो मार्क्सवादको लेनिनवादी धारा हो । निजी सम्पति, राज्य, वर्ग, बजार र अतिरिक्त मूल्य (मुनाफा) को अन्त्य नै मानवमुक्ति हो भन्ने सोच साम्यवाद हो । प्रारम्भमा यो समाजवादी विचारधारा भित्रकै एक हाँगो थियो । सन् १९१७ पछि जब लेनिनले आफ्नो पार्टीको नाम ‘रुसी सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टी’ फेरेर ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ बनाए, समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय परित्याग गरी, कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय ‘कोमिन्टर्न’ गठन गरे, लोकतन्त्रको साटो सर्वहारा राज्य र सोभियत प्रणालीका नाममा एकदलीय प्रणाली अबलम्बन गरे, साम्यवाद समाजवादी आन्दोलनबाट फरक भयो ।
नेपालमा नेकपाका सबै घटक वा समूह यही चिन्तनबाट जन्मिएका हुन् । तर, आज उनीहरु चरम वैचारिक संकटबीच छन् । एकातिर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवाद, टिटो, क्यास्त्रो र किम इल सुंगको विरासतबाट आफूलाई स्वतन्त्र र मुक्त घोषण गर्न पनि सक्दैनन् अर्कोतिर आफूलाई लोकतन्त्रवादी प्रमाणित गर्ने हज्जार मिथ्या प्रयास पनि गरिरहन्छन् । जसरी नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक औपचारिकताले प्रजातान्त्रिक समाजवादी तर व्यवहारले उदारवादी दल हो, ठीक त्यस्तै नेकपाका घटकहरु औपचारिक सिद्धान्तले साम्यवादी तर व्यवहारले सामाजिक फासीवादी समूहहरु हुन् ।
राष्ट्रवादले ‘जन्म, जन्मस्थान वा भाषिक सांस्कृतिक मनोविज्ञानका कारण एकै प्रकारका भएका मानव समूहको आत्मगौरव’ लाई मुख्य तत्व मान्दछ । फ्रान्स, जर्मनी र इटलीको एकीकरण युद्धको समयमा यो विचारधारा जन्मिएको थियो । यो मूलतः हिगेलको दर्शनमा आधारित सोच हो । यसले विवेकपूर्ण कार्यका लागि जनसहमतिको आवश्यकता नहुने मान्यता राख्दछ । नेपालमा राष्ट्रवादलाई मात्र मुख्य दर्शन बनाएको कुनै दल छैनन् । दलहरुले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तमा यो ‘कम्पोनेन्ट’ लाई आ-आफ्नो तरिकाले समावेश गरेको छन् ।
फासीवाद राष्ट्रवादी चिन्तनको अतिवादी धार हो । मूलतः यो नित्सेको दर्शनमा आधारित छ । फासीवादले ‘विवेकपूर्ण शासन र राज्यको सर्वोपरिता’ मा विश्वास गर्दछ । ‘श्रेष्ठ जातिसंग श्रेष्ठ ज्ञान र विवेक हुन्छ, श्रेष्ठ विवेकले श्रेष्ठ राज्य, श्रेष्ठ साम्राज्य र श्रेष्ठ सभ्यता निर्माण गर्छ’ भन्ने सोच नै मूलतः फासीवाद हो । विनिटो मुसोलिनीको फासिष्ट पार्टी र हिटलरको नाजी पार्टी यस विचारधाराका मुख्य दल हुन् । नेपालमा फासीवादलाई औपचारिक दर्शन बनाएको कुनै पार्टी नभए पनि बेलाबेला ‘एक्स्ट्रिम’ राष्ट्रवादीहरु देखिने गरेका छन्, त्यसको स्रोत फासीवाद नै हो ।
धार्मिक कट्टरतावादले ‘निश्चित धार्मिक भावनाबाट अभिप्रेरित राज्य र समाज नैतिकरुपमा बलियो हुन्छ, विपरित धर्मसंगको प्रतिरोधबिना धर्म रक्षा र विस्तार गर्न सकिन्न । तसर्थ धर्मयुद्ध (जेहाद) स्वभाविक र जायज हो’ भन्ने मान्यता राख्दछ । सबै धर्मालम्बीहरुमा यस्ता सोच पाइन्छन् । मुस्लिम ब्रदर हुड, तालेवान, बोकोहराम, अल काइदाजस्ता मुस्लिम संगठनहरु यही दर्शनका उपज हुन् । युरोपमा क्रिश्चियन डेमोक्र्याटस पार्टीहरु यही सोचबाट उदित भएका थिए, पछि सम्बर्धनवादमा रुपान्तरण गरे । भारतमा शिवसेनालाई प्रारम्भमा यस्तै दल मानिन्थ्यो, अहिले मराठी राष्ट्रवादतिर अभिप्रेरित छ । नेपालमा भने धार्मिक कट्टरतावादी दल अहिलेसम्म देखिएको छैन । यो सुखद पक्ष हो ।
संघवादी चिन्तनमा ‘देश फरक राष्ट्रियताहरुको संयुक्त राजनीतिक एकाई हो । समरुप राज्य असम्भवप्राय छ । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, भुगोल र मनोविज्ञानको भिन्नता स्वभाविक हो । राज्य बहुसांस्कृतिक अस्तित्व हो । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समूहहरुको कूलयोग देश हो । राज्य त्यसको संरचना र प्रणाली । तसर्थ, स्वशासन, साझेदारी शासन, स्वायक्तता, समावेशिता र आत्मनिर्णयको अधिकार जरुरी हुन्छ’ भन्ने सोच राखिन्छन् । मूलतः यो शक्ति अकेन्द्रणको दर्शनमा आधारित छ । राजनीतिमा संघवादी चिन्तन निक्कै पुरानो हो । तर, आधुनिक भनिएको पोष्टमोर्डानिज्मले संघवादलाई समर्थन गर्दछ । मूलतः महाआख्यानको अन्त्य, केन्द्रभंग र बहुकेन्द्रको स्थापनाजस्ता दार्शनिक सोचले संघवादी राजनीतिक दर्शनलाई पुष्टि गर्दछ ।
जैविकतावाद भने प्रकृतिवादी दर्शनबाट प्रेरित विचारधारा हो । यसले सामाजिक बेथिति र मानवीय दुःखको मुख्य कारण प्रकृति र मान्छेको सम्बन्धमा हुने असन्तुलनलाई मान्दछ । वातारणीय विनाश, तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, दीगो विकास आदि अवधारणा यस दर्शनसँग जोडिएका छन् । युरोपियन ग्रिन पार्टीहरु यस विचारधारालाई अबलम्बन गर्ने राजनीतिक दल हुन् । नेपालमा यही दर्शनबाट प्रेरित भएर ‘हरियाली पार्टी’ बनेको थियो । अहिले पनि ‘नेपाल ग्रिन पार्टी’ नामको एउटा सानो समूह छँदैछ ।
अराजकतावादले ‘आधिकारिकताको विघठन र स्वस्फूर्त सहकारी संगठन’ मा जोड दिन्छ । यस विचारमा ‘निजी सम्पति’, ‘वैवाहिक संस्था’, ‘राज्य’ र ‘धार्मिक सम्प्रदाय’ प्राधिकारका स्रोत हुन् । यिनीहरुको अन्त्यपछि मात्र मानव समाज खुशी र सुखी हुन सक्दछ । यो विचारधारा मिखायल बाकुनिन, पिटर क्रोपटकिनजस्ता दार्शनिकहरुले अगाडि बढाएका थिए । घोषित रुपमा आफूलाई अराजकतावादी बताउने राजनीतिज्ञ प्रुधो थिए । नेपालमा यो धारको पनि कुनै दल छैन ।
महिलावाद लैङ्गिक प्रश्नहरुको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । महिला मताधिकार, महिला शिक्षा, सम्पतिमा महिला अधिकार, वंश परम्परा, विवाह, बसाईसराई तथा अन्तर्देशीय विवाहमा महिला नागरिकताको प्रश्न, प्रजनन स्वास्थ्य तथा गर्भपतनको अधिकार, रोजगारीमा महिला आरक्षण र सुरक्षा, महिला कार्यघण्टा र महिलाजन्य बिदा तथा सुविधाहरु, महिला विरोधी प्रथा र अन्धविश्वास विरुद्धको सामाजिक जागरण, प्रेम विवाह र सम्बन्धविच्छेदको अधिकार, स्त्रिभ्रुण हत्या विरुद्धको आन्दोलन र गर्भसुरक्षा, राजनीतिमा महिला सहभागिता आदि महिलावादी राजनीतिका मुख्य एजेण्डा हुन् ।
समाजवादको मौलिकता भने ‘समानता र स्वतन्त्रता अभिभाज्य छन्’, स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिका रुपमा ‘लोकतन्त्र’ र समानताको अभिव्यक्तिका रुपमा ‘समाजवाद’ अक्षुण हुन्छन् भन्ने सोचबाट निर्मित छ । यसले उदारवाद र साम्यवादको प्रतिद्वन्दितालाई कृत्रिम र अर्थहीन मान्दछ । व्यक्ति र समाज अविभाज्य छन् । व्यक्ति बिना समाज र समाज बिना व्यक्ति हुँदैन । तसर्थ, व्यक्तिवाद र सामुहिकताबीचको प्रतिद्वन्द्विता अर्थहीन छ ।
सन् १८६३ मा फर्डिनान्ड लासालको नेतृत्वमा गठन भएको ‘जनरल जर्मन वर्कर्स एशोसिएसन’ विश्वको पहिलो समाजवादी राजनीतिक संगठन थियो । सन् १८६९ कार्ल लिब्नेख्त र अगष्ट बेबेलले ‘डेमोक्र्याटिक बकर्स पार्टी अफ जर्मनी’ गठन गरे । सन् १८७५ मा यी दुई पार्टीहरु मिलेर ‘सोसलिष्ट बर्कस पार्टी अफ जर्मनी’ बन्यो । यो पार्टीको कार्यक्रमलाई ‘गोथा कार्यक्रम’ भनिन्छ । कार्ल मार्क्सले यसको खण्डन गर्दै ‘गोथा कार्यक्रमको आलोचना’ लेखेका थिए ।
अबको युगमा राजनीतिक विचारधाराहरु एकअर्काबाट स्वतन्त्र र मुक्त छैनन् । हरेक राजनीतिक दर्शन आफैमा राजनीतिक आन्दोलन बन्न सजिलो छैन । जस्तो कि जैविकतावाद युरोपेली ग्रिन पार्टीका रुपमा भिन्नै राजनीतिक आन्दोलन बन्यो । तर, पछिल्लो चरणमा अरु विचारधाराका दलहरुले पनि जैविकतावादी चिन्तनलाई आफूमा समाहित गरे । महिलावाद बेलायती उदारवादी आन्दोलनको एक अभिन्न अंग थियो, कन्जर्भेटिभहरु त्यसको विरुद्धमा थिए । महिलावादी दर्शनमा आधारित भएर भिन्नै राजनीतिक दल बनाउने प्रयास पनि विश्वमा नभएका हैनन् तर ती प्रयास सफल भएनन् ।
प्रजातान्त्रिक समाजवाद– मार्क्सवादमाथि एक संशोधनवादी आलोचना थियो । जर्मन संशोधनवादीहरु एडर्वट बर्नस्टिन र कार्ल काउत्स्की यो धारका नेता थिए । उनीहरुले सामान्य संसदीय प्रणालीको अभ्यासबाटै समाजवाद संभव हुने धारणा राख्दथे ।
ह्युमानिटारियन समाजवाद– यो समाजवादको अमेरिकी हाँगो हो । यसले समाजवाद र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मिश्रण गरी सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको पक्षपोषण गर्दछ । अमेरिकी समाजवादी पार्टी खासै प्रभावशाली हुन नसकेपछि उनीहरु डेमोक्रेटिक पार्टी भित्रैबाट यस्ता सोचहरु अगाडि बढाउँदछन् । अहिलेका चर्चित डेमोक्र्याटिक सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स यही धारका समाजवादी हुन ।
एक– लोकतन्त्रलाई एक आर्दश राजनीतिक प्रणालीका रुपमा स्वीकार गर्ने तर संसदीय प्रणालीमा मात्र सीमित नहुने । प्रत्यक्ष, सहभागितामुलक, समावेशी र समानुपातिक अवधारणाहरुमा आधारित लोकतन्त्रको विकास गर्ने । त्यसका लागि राज्यका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्ने । राजनीतिक दलहरुभित्र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन र प्राइमर निर्वाचन हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
दुई– निजी, राजकीय, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वबीच प्रष्ट क्षेत्रगत विभाजन हुने समन्वयात्मक अर्थतन्त्र अर्थात् सामाजिक बजारअर्थतन्त्रको ढाँचा अबलम्बन गर्ने । सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजिनक अवसरको वितरणआदि सरकारी स्वामित्वमा ल्याउँने । ठूला उद्यमशील अर्थतन्त्रका क्षेत्र निजीलाई दिने । स्थानीय अर्थतन्त्र सहकारीलाई दिने । जंगल, सार्वजनिक जमिन, सामुदायिक सेवा आदि सामुदायिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिने ।
पाँच– सुशासन र सदाचारलाई समाजवादको आधारशीला बनाउँने । कर्मचारीतन्त्र र अख्तियारको पुनर्गठन गर्ने । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने । प्रणाली र कानुनी व्यवस्थका आधारमा राजनीतिक लागत र निर्वाचन खर्चको पारदर्शीता कायम गर्नु । राजनीतिक दलहरुको खर्चका लागि स्टेट फन्डिङ्ग गर्ने । वास्तविक कारोवारमा आधारित कर प्रणाली लागू गर्ने । चुस्त र मितव्ययी सरकारको अवधारणा मार्फत् चालु खर्च ४% भन्दा मुनी झार्ने र पुँजीगत खर्चमा तीव्र बृद्धि गर्ने ।
नेपालमा यदि कसैले समाजवादको कुरा गर्दछ भने त्यसको प्रस्थानविन्दू यिनै हुन् । यी प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने तर समाजवादको रटान नछोड्ने तरिका राजनीतिक झुठ र बेइमानी बाहेक केही हैन ।